I-Kubuntu 19.04 iza ne-KDE Plasma 5.15 neWayland yokuhlola Kusuka kuLinux
UKubuntu 19.04 ufika ne-KDE Plasma 5.15 kanye neWayland yokuhlola
"Ukunambitheka" okusemthethweni Kubuntu 19.04 ikhishwe njengengxenye yochungechunge lwe-Ubuntu 19.04 Disco Dingo enezinto eziningana ezivuselelwe nokuthuthuka okuningi.
Ukuza noshintsho olufanayo kusuka ku-Ubuntu 19.04 Disco Dingo, uhlelo lokusebenza lwe-Kubuntu 19.04 lulapha ukunikeza abasebenzisi okwakamuva ekuhlangenwe nakho kwe-KDE okuxhaswe yi imvelo yokuqhafaza i-KDE Plasma 5.15.4 ne-KDE Applications 18.12.3 software suite, konke kungaphansi kwamathambo we-Qt 5.12.2.
Vele, i-Kubuntu 19.04 inezibuyekezo eziningana kusoftware yayo ezenzakalelayo, kufaka phakathi i- Isiphequluli seMozilla Firefox 66.0 nehhovisi leLibreOffice 6.2.2. I-Latte Dock yakamuva engu-0.8.8, i-KDevelop 5.3.2 ne-Krita 4.1.7 nayo iyatholakala.
Okunye okusha kuKubuntu 19.04 ukuqaliswa kwesixhumi esibonakalayo sokumiswa kwemvelo ye-KDE Plasma ukuvumela abasebenzisi ukuthi balungiselele abashayeli bamathebulethi abo eWacom, kanye neseshini yokuhlola yeWayland engenziwa isebenze ngokufaka iphakheji. i-plasma-indawo yokusebenzela-wayland.
Ngaphansi kwe-hood, i-Kubuntu 19.04 inikwe amandla ngochungechunge I-Linux Kernel 5.0, njenge Ubuntu 19.04 Disco Dingo kanye nakho konke okunye "ukunambitheka" okusemthethweni.
Ungalanda uKubuntu 19.04 njengamanje ku- ikhasi elisemthethweni uma ufuna ukuyifaka kukhompyutha yakho. Uma uneKubuntu 18.10 khumbula ukuthi ungabuyekeza usebenzisa ithuluzi lokuvuselela.
UKubuntu 19.04 uzoxhaswa izinyanga eziyisishiyagalolunye, kuze kube nguJanuwari 2020, futhi kusekelwa kuphela amasistimu anokwakhiwa okungama-64-bit.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » UKubuntu 19.04 ufika ne-KDE Plasma 5.15 kanye neWayland yokuhlola
Uhlobo olusha lweFedora 30 luzofika phakathi kuka-Ephreli 30 noMeyi 7